Ezenye Isayensi -
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 28, 2020 03: 33 Awekho amazwana
Embusweni weKongo kukhona ubuciko bempi bezandla ezingenazandla ezibizwa ngokuthi 'Ngolo', ufundisa amaqhawe okwamele abhekane namabutho okuhlala. Kwakukhona nesiko eKongo lapho ... Funda kabanzi
I-baobab inamaseli e-cambia asakazeke ehlathini, okwenza ukuba kube khona amagxolo ngaphakathi kwesiqu ngokushesha lapho sekumba. Ngaphezu kwalokho, abantu ukhathazekile ... Funda kabanzi
Idolobhana laseYendouma eMali: IYendouma, iyidolobhana laseMali ezweni laseBoxon eliseBandiagara, inhloko-dolobha yezwe lakwaFordon elisebangeni elingamakhilomitha angama-75 empumalanga neMopti
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 15, 2020 09: 28 Awekho amazwana
Lesi sifunda sitholakala esifundeni saseSahelian futhi sinezindawo ezintathu zemvelo: ithafa, umfula nethafa. Ukuphila Isi-Dogon izwe ihlelwe ngalesi eweni okuyinto s ... Funda kabanzi
Ikhambi le-Covid-19: I-Afrika iyazinakekela, ukushona kwe-Zero ngewashi eMadagascar "Abamhlophe (iWesterners) babehlele ukungcwaba i-Afrika ne-covid-19" Kulokhu, baqala ukwenza ibhokisi lapho. ITogo, ithuna lase-Ivory Coast kanye netshe lethuna eSenegal… (VIDEO)
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 15, 2020 05: 10 Awekho amazwana
Kodwa-ke, umhlangano uzohlelwa eMali, abalilayo bazofika kithi bevela eNiger naseBurkina. Abadansi bazovela bevela eCamibia, inqobo nje uma kungamaCongo amabili, sithumele ... Funda kabanzi
Imibhoshongo, imidwebo esezindongeni nasemathuneni oPharao bathi abaMnyama / ama-Afrika, ngendlela, ibhayibheli lithi iGibhithe izwe labamnyama / ama-Afrika, izwe likaCham (ukhokho wethu, indodana UNowa) AmaHubo 105: 23,27 - 106: 22)
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 4, 2020 03: 12 Awekho amazwana
Lapho umbusi waseFrance uNapoleon Bonaparte efika eGibhithe, yathukuthela lapho ethola ngamehlo akhe le mpucuko enkulu yabaMnyama / yase-Afrika, hhayi yedwa ... Funda kabanzi